I-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) I-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5
Ukusethwa kokuqhubeka kwethrendi kungadayiswa ngokuhambisana nokusethwa komfutho.
Lapho uhweba lolu hlobo lwesu, kubalulekile ukuthi sikhombe ngokucacile isiqondiso sethrendi kanye nesigaba sokuncipha kwemakethe okwenzeka ngaphambi kokuqubuka okuningi.. Kufanele futhi sikhombe amaleveli okusekela nawokumelana okufanele kwephulwe ukuze sisabele kahle kakhulu njengoba ukusethwa komfutho kukhula..
Leli su libonisa ukuthi singahweba kanjani ukusetha okuphuma phambili siqonde kuthrendi sisebenzisa amabhendi e-Bollinger, 50 UMAMA, kanye ne-RSI.
1 50 Exponential Moving Average
3 Amabhendi eBollinger
4 Ukuhweba Strategy Concept
5.1 Imiyalo Yokufakwa Kwamasu Okuhweba Forex
5.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ipulatifomu Yokuhweba
5.3 Indlela yokufaka i-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5?
Izilinganiso ezihambayo cishe ziyizinhlobo eziyisisekelo kakhulu zezinkomba zobuchwepheshe. Amathuluzi alula abahwebi abangawasebenzisa ukuhlonza izikhombisi-ndlela kanye nokuhlehla kwethrendi okungenzeka.
Abahwebi bangabona kalula isiqondiso sethrendi noma ukuchema kwethrendi besebenzisa imigqa emaphakathi ehambayo ngokubheka ukuthi isenzo senani ngokuvamile sihlobene nomugqa omaphakathi onyakazayo.. Ngaphandle kwalokhu, imigqa emaphakathi ehambayo futhi ivame ukutsheka lapho iqonde khona. Ngakho-ke, ukuthambekela komugqa omaphakathi onyakazayo nakho kungaqinisekisa ngokubonakalayo isiqondiso sethrendi noma ukuchema kwethrendi okuhlonzwe umthengisi.
Izikhathi ezithile zomugqa ezihambayo zisetshenziswa kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye. Ezinye zivame ukwamukelwa njengenkomba yendlela yethrendi esuselwe kuma-horizons wesikhathi ahlukahlukene.
Isilinganiso esihamba ngamabha angu-50 samukelwa kabanzi njengenkomba yethrendi yamaphakathi nethemu. Empeleni, abadayisi abaningi bahweba kuphela ngendlela ekhonjiswe yi- 50 umugqa omaphakathi ohambayo.
I Isihlobo Amandla Inkomba (I-RSI) iwuhlobo lwe-oscillator lwenkomba yobuchwepheshe eguquguqukayo kakhulu. Isetshenziselwa kakhulu ukuhlonza izimo zemakethe ezithengwa kakhulu nezidayiswe kakhulu. Noma kunjalo, ingasetshenziswa futhi ukukhomba umfutho kanye nesiqondiso sokuthambekela.
I-RSI ihlela umugqa oshova phakathi kwebanga likaziro kuye 100. Ukuhlehla kwalo mugqa kusekelwe enzuzweni eyisilinganiso kanye nokulahlekelwa okumaphakathi kwentengo okusekelwe kudatha yentengo yomlando yakamuva.
Ububanzi be-RSI ngokuvamile bunezimpawu emazingeni 30 futhi 70. Laba bomaka bamele amaleveli athengiswe ngokweqile nathengwe ngokweqile ebangeni le-RSI. Ulayini we-RSI owela ngezansi 30 kuyinkomba yemakethe ethe xaxa, ngenkathi ulayini we-RSI wephula ngenhla 70 kuyinkomba yemakethe ethengwe ngokweqile. Zombili lezi zimo ziyizimo eziyinhloko zokuhlehla okumaphakathi. Ngokwesinye isandla, ulayini we-RSI nawo ungaqhubeka uhlala ngale kwe- 30 futhi 70 ububanzi noma nini lapho umfutho uhamba ngamandla endaweni ethile. I-RSI ingase iqhubeke ibonise imakethe edayiswe ngokweqile noma ethengwe ngokweqile kodwa lokhu kungase kube ngenxa yokuqubuka komfutho oqinile..
Abadayisi abaningi nabo bangangeza umaka ezingeni 50. Lo maka usetshenziswa ngokuyinhloko njengesisekelo sokuchema kwethrendi. Ulayini we-RSI ngokuvamile uhlala ngenhla 50 emakethe ye-uptrend nangaphansi 50 emakethe ye-downtrend. Abanye abadayisi bazophinde bengeze omaka emazingeni 45 futhi 55. Level 45 ngokuvamile isebenza njengeleveli yosekelo yolayini we-RSI emakethe ye-uptrend, ngenkathi izinga 55 futhi ingasebenza njengezinga lokumelana ne-RSI emakethe ye-downtrend.
I-Bollinger Bands iyinkomba yezobuchwepheshe engasetshenziswa futhi ngezinjongo ezihlukahlukene. Ingakhombisa inkomba yethrendi, ukungazinzi, umfutho, kanye nezimo zemakethe ezithengwa kakhulu nezidayiswe ngokweqile.
I-Bollinger Bands ihlela imigqa emithathu eshadini lentengo. Ulayini ophakathi nendawo yi-20-bar Simple Moving Average (Isikolo sebanga eliphezulu) umugqa, kuyilapho amabha amabili angaphandle agudluke ngenhla nangaphansi komugqa ophakathi kukhona ukuchezuka okujwayelekile ukusuka enanini eliyisilinganiso.
Njengoba umugqa omaphakathi uwumugqa omaphakathi onyakazayo, ama-Bollinger Bands angasetshenziswa njengenkomba yendlela yethrendi njengoba nje noma yimuphi umugqa wesilinganiso onyakazayo ungenza. Isenzo senani ngokuvamile sihlala engxenyeni ephezulu yebhendi emakethe ye-uptrend, futhi engxenyeni engezansi yebhendi emakethe ye-downtrend.
Imigqa yangaphandle ingasetshenziswa ukuze kubonakale ukuguquguquka ngenxa yokuthi isekelwe ekuchezukeni okujwayelekile. Amabhendi angaphandle ayanda lapho ukuguquguquka kukhula futhi kunkontileka lapho ukuguquguquka kuncipha.
Imigqa yangaphandle ibuye isetshenziselwe ukukhomba amazinga entengo athengwa kakhulu nadayiswe kakhulu. Indawo engaphezulu komugqa ongenhla ibhekwa njengethengwa ngokweqile, kuyilapho indawo engezansi komugqa ophansi ibhekwa njengedayiswe ngokweqile. Noma kunjalo, imigqa yangaphandle efanayo ingasetshenziswa futhi ukukhomba ukuqhuma komfutho oqinile. Umehluko phakathi kwesimo ngasinye uzosuselwa ekutheni isenzo senani sakha kanjani njengoba intengo ithinta imigqa. Ukwenqatshwa kwentengo okwenzeka endaweni yemigqa yangaphandle kuyinkomba yesilinganiso sokuhlehla okungenzeka, kuyilapho ukuqhuma komfutho okunamandla ngale kwemigqa yangaphandle evela esimweni sokuntengantenga okuphansi kubonisa ukuqhuma komfutho okunamandla okungenzeka.
Leli su lokuhweba liyisu lokuqalisa umfutho elihweba ngokuhlangana nethrendi kusetshenziswa ama-Bollinger Bands, 50 Umugqa we-EMA, kanye ne-RSI.
I- 50 Ulayini we-EMA usetshenziswa njengesihlungi sesiqondiso esiyinhloko. Ukuhweba kuthathwa kuphela ngendlela yethrendi ekhonjiswe yi- 50 Umugqa we-EMA.
Sizosebenzisa i-RSI njengolunye ungqimba lokuqinisekiswa kwethrendi. Lokhu kuzosuselwa lapho ulayini we-RSI ngokuvamile uhlobene nomaka kumaleveli 45, 50 futhi 55.
Amabhendi we-Bollinger abe esesetshenziswa njengesisekelo sokuhlonza ukuqubuka komfutho okuvela ezigabeni zokuncishiswa kwemakethe.
Umugqa ophakathi wama-Bollinger Bands kufanele ube ngaphezu kwe 50 Umugqa we-EMA.
Ulayini we-RSI kufanele uhlale ngenhla 45.
Ama-Bollinger Bands kufanele enze isivumelwano.
Isenzo senani kufanele siphuke ngaphezu komugqa ophezulu wama-Bollinger Bands kanye nolayini wokumelana okhonjiwe.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho isenzo sentengo sikhombisa izimpawu zokuhlehla okungenzeka kwe-bearish.
Umugqa ophakathi wama-Bollinger Bands kufanele ube ngaphansi kwe 50 Umugqa we-EMA.
Ulayini we-RSI kufanele uhlale ngezansi 55.
Isenzo senani kufanele sephule ngaphansi komugqa ophansi wama-Bollinger Bands kanye nolayini wosekelo okhonjiwe.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho isenzo sentengo sikhombisa izimpawu zokuhlehliswa okungenzeka kwe-bullish.
Amasu okuphuma kwe-Momentum asuselwa ku-Bollinger Bands iyisethaphu enhle yokuvuselela umfutho evela esigabeni sokuncipha kwemakethe.. Leli su livele liqondanise ukusethwa komfutho kanye nenkomba yethrendi kusetshenziswa i-RSI kanye ne- 50 Umugqa we-EMA.
I-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5 iyinhlanganisela ye-Metatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5 inikeza ithuba lokuhlonza izici ezihlukahlukene namaphethini amandla entengo angabonakali ngeso lenyama..
Indlela yokufaka i-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5?
Landa i-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5.zip
Hamba kwesokudla ukuze ukhethe i-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5
Uzobona I-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5 iyatholakala eshadini lakho.
Isiqephu esedluleUsuku Lokuhweba I-PAMXA MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoHeiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5